Morarano, Antsirabe II : nifampizara hafalina tamin’i Neny sy Dr Robinson – MyDago.com aime Madagascar
1O minitra tsy ahatongavana tao Mahazoarivo, toerana voatendry hanohizana ny fampielezankevitra androany dia tsy maintsy nipetraka ny angidim-by nitondra ny kandidà tohanan’ny movansa Ravalomanana, noho ny toetr’andro ratsy no nahatonga izany. Morarano, Antsirabe faha roa no toerana niandrasana ny fisavan’ny toetr’andro. Na izany aza dia tsy nahasakana ireo mponina manodidina teny nanararaotra nitafa tamin’ny kandidà Dr Robinson Jean Louis sy i Neny Ravalomanana. Fotoana nahafahana nijery ifotony ny olan’ny mponina izany ary nahafana nanome toro-marika ho azy ireo amin’ny fampiasana ny « bulletin unique ».Afaka nitafa nivantana tamin’ny filoha Ravalomanana ihany ireo mponina teo an-tanana tamin’ny alalan’ny antso an-tariby.
Auteur Solo Razafy*Publié le 1 octobre 2013 Catégories Politique
8 réflexions sur « Morarano, Antsirabe II : nifampizara hafalina tamin’i Neny sy Dr Robinson »
Mba velom-panantenana ireto vahoaka madinika fa mba misy mpitsidika sy mahatsiaro asa masina ny fanavotana ny firenena ho hataonao Atoa Robinson ka aza mandiso fanantenana fa dia efa mijaly ny vahoaka.
1 octobre 2013 à 19 h 55 min
Ireo aloha dia mety ho 100% n°33 satria tsy hisy olona hafa ho tonga hijery andrizareo eny mihitsy.
2 octobre 2013 à 1 h 45 min
Maereza @ fampielezan-kevitra fa ts mora ny adidy noraisanareo io. Aoka mba ts handiso fanantenana ny olom-pirenenea fa mba izay programme ho tanterahina no lazaina @ fampielezan-kevtra.
2 octobre 2013 à 2 h 05 min
AZA ADINO TOMOKO NY MANASAVA FA I DADA SY I NENY DIA VONONA TOKOA NY HILATSAKA HO FIDIANA ARAKA NY HETAHETAN NY MALAGASY TIA FANDROSOANA FA NOHO NY HASOMPARANA NATAON IREO FOZA ORANA TAMIN NY FOMBA REHETRA DIA TSY AFAKA NIFIDY IZY IREO KA NANOHANA AN I DR RJL.
NY TENA MALAGASY TSY MAINTSY MANDRESY
Ohatran’ny voatsindry tsara ilay teny hoe « noho ny toetr’andro ratsy no nahatonga izany »… izany hoe raha tsara izany ny andro dia tsy nanana eritreritra ny andalo eny mihitsy ry zareo??? Sa hoe ambanivohitra dia tsy maninona na tsy tsidihana aza….???
Marary fo @’izany eo !!! »Darih » ngah???hihihi
Aza hadino fa nisy fandraisana anjara MAVITRIKA avy ao @ MPITARIKA ny ankolafy mihinsy aza
izao tsy fahafahan’i dada sy Neny nirotsaka izao an!!nanantena mantsy izy fa izy no hisolo an’i dada e!!!
Dia io izy miakapokapoka io ambony io fa voan’ny daka sy hitamason’i dada ilay Ranamana, ilay atao hoe:
Zana-baratra e!!hainao???mbola ho tsarain’ny tantara ireny fa tsy taitra!!!
Misy antony koa, no nahatonga anireo likôptera nipetraka teo amin’io toerana io !
NAKA SARY AN’ILAY ANKIZY MITANA ANGADY, IZAY MBOLA MAHATSIARO SY MALAHELO AN’I DADA REHEFA MAMPIDITRA AN’ITY « TABLIER MAITSO », ARY DIA VOATERA TSY MANKANY AN-TSEKOLY INTSONY NOHO NY NATAON’NY FOZAN-DOZA !!
Izao no manjoa an’ny ankizy aman’alina. Porofo mazava izao fa potika ny hoavin’ny taranaky ny malagasy, indrindra fa ireo tena lazaina fa mitrongo vao omana !
Ohatry ny hitako sambatsambatra be ireo olona izay efa tena ao anatin’ny adim-piainana
no indro nisy Anjely nilatsaka nandray tanana azy ……..oooontsa ny FO ray olona mahita ireto
mpiasa tany notronin’i Neny TAMPOKA teo e?? te ho eo @ toeran’izay ireo aho t@’io fotoana io.
Sambatra ianareo ray olona nilatsahan’i Anjely ( neny ) teo.
Aleo aloha ahitsy ihany ilay resaka fa sao misy marary Fo eto indray.
MAMY BE ZANY NENY ZANY!!!!
Précédent Article précédent : Andian-tsary fampielezan-kevitra tao Miarinarivo 30 sept 13
Suivant Article suivant : Fampielezan-kevitry ny Dr Robinson Jean Louis : Fahombiazana ny dia tao Mandonto